ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: August 2012
အာဖရိကမှာတော့ ခေါင်းကိုက်ရောဂါကို ဒီလိုကုပေးနေပါတယ်... ဆန္ဒရှိလျှင်သွားရောက်ကာ
ဤကဲ့သို့ ကုသမှုမျိူး ခံယူနိုင်ပါတယ်...
Posted by peter kyaw | at 12:41 AM | 1 comments
အသဲ၊ အဆုတ်၊ နှလုံး၊ အူသိမ်၊ အူမ ... ၃၂ ကောဌာသ မြင်အောင်ကြည့် နိုင်လျှင်...
ကာမရာဂဆိုတာ မဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တော့ ပါ....
ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ လွယ်တာမှတ်လို့ ဗျာ...
အထက်ပါအရည်အချင်းတွေနဲ့ ပြည့် ဝရမယ်တဲ့ ...
ပျော်ရွှင်ခြင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့ အခြေခံဥပဒေ ၅ ချက်...
ထိုင်ဝမ်က ပရိဘောကပစ္စည်း၊ ကုန်စည်ပြပွဲမှာ လာရောက်ကြည့် ရှုအားပေးသူများကို
ဧည့် ညကြိုအမျိူးသမီးများက ရေခဲမုန့် ခွံ့ ကျွေးနေပုံ... အားရပါးရစားမယ်ဆိုတာချည်းပဲ...
အိုင်ဖုံးပေါ်အိပ်နိုင်လောက်အောင် သေးငယ်သည့် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှခွေးပေါက်စလေး...
ရှေ့ မျက်နှာနောက်ထားလို့ လျှောက်ကြွားဖို့ အလှပြင်...
အခုအခါ ထိုအမျိူးသမီးလိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းခွဲစိတ်ပြုပြင်ခြင်းဟာ အနောက်နိုင်ငံများမှာ
ဗျာ.... ကျွန်တော့် ကိုလစ်လပ်နေတဲ့ နေရာမှာ အစားထိုးခန့် မယ်...
ဟာဗျာ... မဟုတ်တာ...ဘယ်တော့ အလုပ်စဆင်းရမလည်းဗျာ...
No pains , no gains အနာခံမှ အသာစံရမည်...လို့ စာဆိုရှိသည်နှင့် အညီ...
ရထားစီးယင်း မေးတင်ပြီးအိပ်လို့ ၇အောင်တီထွင်ခဲ့ တာပါတဲ့ ...
သန်စွမ်းသူထက် ပိုရဲရင့် လို့ ဒီလိုအမြင့် ခုန်ချနည်းနဲ့ ဆော့ နိုင်တာပေါ့ လေ...
အိုဘယ့်ဘုန်းတော်ကြီး...
ထွင်တတ်ပါပေ့ ကိုဂျပန်တို့ ရယ်...
အကောင်လိုက်ကို မီးကင်တော့ တာပါပဲ...
အိန္ဒိယက ဓါတ်တိုင်... ရွှေပြည်ကြီးတောင်မှိုင်...
အဘက မီးခြစ်ကျောက်ရှာတော့ ကျွန်မကလည်းဘာရမလည်း အပ်ပျောက်ရှာတာပေါ့ ...
မီးကိုချစ်တယ်တဲ့ လား.... ရှက်စရာကြီး...
အစစ်လို့ တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ ... ဇာတိရုပ်ကတော့ ဒီလိုပေါ်ပါတယ်...
Posted by peter kyaw | at 2:43 AM |0comments
Posted by peter kyaw | at 5:45 AM |0comments
ကားစက်ဆီများဖြင့် မျက်နှာအားသုတ်လိမ်းထားပြီး မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်နှယ် ပုံဖော်ဝတ်ဆင်ထား
သည့် အမျိူးသားတစ်ဦး၏ ထူးခြားလှသည့်ပုံက ကမ္ဘာတစ်လွှား ခရီးသွားများ၏အကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ
ရွေးချယ်ရေးအကဲဖြတ်သူများရဲ့ အာရုံကိုဖမ်းစားထားခဲ့ ပါတယ်...
ထိုသူဟာ မက္ကစီကိုနိုင်ငံတွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သည့် ပွဲတော်တစ်ခုတွင် ကျေးရွာသားများက ၎င်းတို့ ၏ခါး
တွင် ကျွဲ၊နွားများဆွဲသည့် ခြူများချိတ်ဆွဲကာ မျက်နှာကိုလည်းမော်တော်ကားစက်ဆီများသုတ်လိမ်းပြီး မိစ္ဆာ
ကောင်၊ မကောင်းဆိုးဝါးများအဖြစ်ပုံဖော်ခဲ့ သည့်ပွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
မက္ကစီကိုနိုင်ငံ၊ ဆန်မာတင် တီလ်ကဂျက်ဒေသတွင် အပန်းဖြေအနားယူခရီးထွက်နေသည့် ဓါတ်ပုံဆရာတစ်
ီဦးဖြစ်သူ လက်စ်လီဂရန်ဒါဟီးလ် တစ်ယောက် ထိုထူးခြားဆန်းပြားသည့် အဖြစ်အပျက်ပွဲကို အံ့ သြတစ်ကြီး
ဖြစ်ကာ အမိအရမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
နွားခြူလုံးတွေဆွဲပြီး ကားစက်ဆီတွေသုတ်လိမ်းကာ မကောင်းဆိုးဝါးအဖြစ် နှစ်စဉ်သရုပ်ဆောင်
လေ့ ရှိကြတာ မက္ကစီကိုနိုင်ငံက ရွာတစ်ရွာမှာဖြစ်ပါတယ်...
အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာကျော် Grand Canyon တောင်ကြားဒေသကြီး ရဲ့ ဆန်းကြယ်လှတဲ့ 
ရှုခင်းပုံကတော့သဘာဝရှုခင်းဓါတ်ပုံကဏ္ဍမှာ ပထမဆု ရရှိခဲ့ ပါတယ်...
တန်ဇန်းနီးယားနိုင်ငံ၊ ဆရင်ဂတီ အမျိူးသားဥယျာဉ်ကြီးက မြင်းကျားနဲ့ နွားရိုင်းများ ရဲ့ နွေပူပူ
ဖုံထူထူ ရှုခင်းဓါတ်ပုံကိုတော့ ကင်မရာမင်း အင်ဒရူးကိုးလ်မန်း ကရိုက်ကူးခဲ့ တာပါ...
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဥဒီပူရ် နယ်မှ ဟိုလီ ပွဲတော်တွင်ပါဝင်ဆင်နွှဲနေသည့်ရေဗူပေါင်းကိုင်ထား
သော ကောင်လေးတစ်ဦးကိုလည်း သူ့ ကိုဓါတ်ပုံရိုက်မည့် သူကိုတားဆီးနေပုံကိုမှ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အနောက်ဘင်္ဂေါပြည်နယ်၊ ပန်စကူရာ ဒေသရှိ ပန်းခင်းတစ်ခုတွင် လွတ်လပ်
ပျော်ရွှင်စွာရယ်မောနေသည့် ကလေးငယ်များရဲ့ ပုံကလည်း မိသားစုဘ၀ရှုခင်း ကဏ္ဍတွင်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နာဂလန်းဒ်နယ်၊ ကိုဟီးမားအရပ်မှ မီးစားပြသူတစ်ဦးရဲ့ သက်ဝင်လှုပ်ရှား
Posted by peter kyaw | at 5:17 AM |0comments
Labels: news:photos: dailymail.co.uk
I wouldn't be seen dead in that! Mummies dug up forachange of wardrobe
အကယ်၍သာဤအလောင်းကောင်များသာ အသက်ရှင်လျှက်ရှိနေပါလျှင် သူတို့ အားလုံးဝတ်
ဆင်ထားလိုက်သည်မှ အပျံစား၊ အကောင်းစားနှင့် အလှပဆုံးလို့ သာဆိုနိုင်ပါတယ်...
အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ ရွာကလေးတစ်ခု၏ ဒေသဆိုင်ရာရိုးရာအစဉ်အလာ
အရ ထူးထူးဆန်းဆန်းပင် သေဆုံးသွားသူများ၏မြုပ်နှံထားခဲ့ သောအလောင်းများအားပြန်လည်
ဖော်ယူကာ အ၀တ်အစားသစ်များ လဲလှယ်ဝတ်ဆင်ပေးလေ့ ရှိကြသောကြာင့် ပင်ဖြစ်ပါတယ်...
ကွယ်လွန်သွားသူများရဲ့ မိသားစုဝင်များဟာ မြုပ်နှံထားသည့် မိဘ၊ဘိုးဘွားများ၏အလောင်းများ
အားပြန်လည်တူးဖေါ်ယူကာ ၎င်းတို့ အားသတိတရ၊ အမှတ်ရသောအားဖြင့် အ၀တ်အစားသစ်
ရွာသားတွေဟာ ပြန်လည်ဖေါ်ယူထားသည့် အလောင်းကောင်များအား အ၀တ်အစားသစ်များ
၀တ်ဆင်ပေးရုံသာမက သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်များကဲ့ သို့ အလား ရွာအတွင်းတွင် တစ်ပါတ်လည်
ကဲ ... အ၀တ်အစားလည်းလဲပေးပြီးသွားပြီ... ရွာထဲလည်းလျှောက်ကြည့် ပြီးသွားပြီ...
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဆူလာဝေဆီကျွန်းမှ တာနာတိုရာဂျာ ရွာကလေးရဲ့ ရိုးရာဓလေ့ ပါတဲ့ ဗျာ...
A family member touches the preserved body of his relative duringatraditional ritual called Ma'nene in Tana Toraja, Sulawesi island, Indonesia
မာနင်းလို့ ခေါ်သည့် အဆိုပါအစဉ်အလာလုပ်ရပ်ဟာ ရွာသားတွေရဲ့ ၎င်းတို့ ၏သေဆုံးကွယ်လွန်
သွားသော မိဘဆွေမျိူးများအား ချစ်ခင်ခြင်းကိုဂုဏ်ပြုပြသသည့် အနေဖြင့် သုံးနှစ်ပြည့် တိုင်း ပြု
အဆိုပါအခမ်းအနားကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဆူလာဝေဆီကျွန်း တိုရာဂျာ ခရိုင်က ရွာက
သေဆုံးသွားသည့် မိသားစုဝင်တွေ ( ရဲ့ ဝိဥာဉ်တွေ ) ဟာ နှစ်ပေါင်းရာနှင့် ချီပြီးကွယ်လွန်ခဲ့ တာ
ကြာမြင့် သည့် တိုင်အောင် ၎င်းတို့ နှင့် အတူရှိနေကြတယ်လို့ ယုံကြည်ကြကြောင်း ဒေသခံတစ်
နက်ကတိုင် ( လည်စည်း ) နဲ့ ကုတ်နဲ့ အကျအန ၀တ်ဆင်ပေးပါတယ်......
Dressing down: Family members carryacoffin containing the preserved body of their relative after puttinganew set of clothing on it
အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဖြစ်ထွန်းနေတယ်ဆိုတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကို ထ ကြည့် မိယင်
သေသောသူကြာယင်မေ့ ဆိုသော်လည်း အမေအိုမှာတော့ ချစ်ခင်ပွန်းကို မမေ့ နိုင်သေး
Lively tie: This family remember their loved one by digging up his grave every three years
မိသားစုသံယောဇဉ်အလွန်ကြီးမားတဲ့ ရိုးသားကြတဲ့ ကျေးလက်ဒေသကလူတွေပါပဲ...
The ritual is held once every few years when family members gather to clean the graves and change the clothes of their deceased relatives to honor their spirits
လီယန် လို့ ခေါ်သည့် ကျောက်ဂူရှေ့ တွင် အလောင်းများအား ပိတ်စများဖြင့် ထုတ်ပိုးနေကြစဉ်...
Villagers bind cloth rolls containing bodies in front ofastone grave called Liang
အခုခေတ်၊ ခေတ်စားနေတဲ့ မော်ဒယ်လေးတွေလို ဆံပင်လည်းဆေးဆိုးပေးမှာလား...
သေဆုံးသွားတာ နှစ်တွေကြာပေမယ့် လည်း အမေဟာအမေပါပဲ...
Glad rags: Locals believe dead family members are still with them, even if they died hundreds of years ago
သြော်....ငါလည်းတစ်နေ့ ဒီနေရာရောက်ရဦးမှာပါလား...လို့ တွေးနေသလားပဲ...
An elderly woman stands in front of the graves where her family members are buried
ပွဲတော်အတွင်း အလောင်းများအား နေအိမ်တစ်လုံးတွင်စုထားသည်လေ့ ရှိပါတယ်...
Coffins containing mummies are seen inagrave house called Patane during the ritual
If these mummies weren't already dead, they'd be dressed to kill.
That's because they've been dug up as part ofabizarre local ritual inavillage in Indonesia that involves giving decomposed corpsesanew look.
Family members of the deceased exhuming their ancestors' bodies and change their clothes asaway of remembering them. They then walk the dead around the village, almost like zombies.
The ritual, called Ma'nene, happens every three years to honour the villagers' love for the deceased. It is carried out in the Toraja district of Indonesia's South Sulawesi Province.
Posted by peter kyaw | at 2:33 AM |0comments
ဒီလိုပုံနဲ့ နောက်ပြန်မလှည့် ပါဘူးဆိုသလိုဖြစ်နေပါပေါ့ လားဆရာတို့ ရယ်...
Posted by peter kyaw | at 2:01 AM |0comments
Labels: funny: video clip
ရကောက်ရထားကြီးပျော်ပျော်စီး ဆိုတာသူတို့ မှအစစ်ပါပဲဗျာ...
Posted by peter kyaw | at 2:54 AM |0comments
အမျိူးသမီးတွေက ဘောင်းဘီဝတ်ခွင့် ရပြီး ပြည်သူတွေလည်းပီဇာ စားနိုင်ကြပါပြီတဲ့...
သူ့ ကျတော့ မိန်းမငယ်ငယ်ချောချောလေးယူထားပြီးနိုင်ငံခြားဖြစ်ပစ္စည်းတွေသုံးနေတာ...
ရိုးရာလည်းမပျက် ခေတ်မှီလျှက်ပေါ့ ....
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ရေကြီးနေချိန် ပြည်သူတွေ၇ဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး...
သြော်.... သူလေးက ညဖက်ဆိုအဲဒါကြီးဖက်ပြီးအိပ်နေကျကိုး...
ဖွဲ့ နွဲ့ ဆင်ထုံး... အလှဆုံး...
ချူပ်တီးခဲ့ ရတာတွေများလို့ ဖွင့် ထုတ်ချိန်မှာ အခုလိုဖြစ်သွားရတာပါပဲ....
တူမလေးကချစ်စရာ.... အန်တီမမ ၀လိုက်တာ...
ရွှေပြည်ကြီးမှာလည်း မကြာခင်အဲဒီလိုဆိုင်းဘုတ်တွေထောင်ရတော့ မယ်ထင်တယ်...
ပြင်ရဆင်ရတာမောလှသဗျာ... ခဏလောက်တော့ နားဦးမယ်...
ငယ်ကတည်းကအကျင့် ၊ ဖျောက်ရခဲပေခြင်း...
Posted by peter kyaw | at 3:01 AM |0comments
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကျောက်စရစ်ခဲများသယ်ဆောင်လာသည့် ကုန်တင်ယာဉ်ကြီးတစ်စင်း ကိုယ်
ပိုင်ကားတစ်စင်းဘေးအရောက်ထိုကားလေးပေါ်သို့ တိမ်းမှောက်သွားခဲ့ ရာတွင် ထိုကိုယ်ပိုင်ကား
လေးမှာ ပြားချပ်သွားသော်လည်း ယာဉ်မောင်သူမှာအသက်မသေပဲ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာအနနည်း
ငယ်သာရပြီးအသက်ဘေးမှာလွတ်မြောက်ခဲ့ ရာ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားများရော ဆေးရုံမှတာ
၀တ်ရှိသူများအပါအ၀င် မြင်တွေ့ ရသူအပေါင်း အံ့ သြမဆုံးဖြစ်ခဲ့ ရပါတယ်...
ထိုယာဉ်ငယ်ကလေးမှာ ယာဉ်မောင်းသူမှာ အောက်တွင်ပိပြားနေသည့် ကားထဲမှ တစ်နာရီနီးပါး
ကြာအောင် ဆွဲထုတ်ယူခဲ့ ရသည့် တိုင် အသက်မသေဘဲ ကံကောင်းထောက်မစွာလွတ်မြောက်
နိုင်ခြင်းမှာ အလွန်ပင်အံ့ သြထူးဆန်းဖွယ်ကောင်းလှပါတော့ တယ်...
A truck of crushed stone overturned and flattened the nearest car.
The rescue workers couldn’t believe their eyes when they found the driver of the car alive. The man who spent an hour inatotally smashed vehicle had only several bones broken.
ကျောက်စရစ်တွေတင်တဲ့ ကားကြီး အခုလိုတိမ်းစောင်းပြီး
မှောက်သွားခဲ့ လို့ 
ကျောက်စရစ်တွေအကုန်လုံးဖုံးသွားလို့ တစ်နာရီကြာအောင်ဖယ်ရှားခဲ့ ရပြီး...
ဒီလောက်အထိ ပိပြားသွားတဲ့ ကားလေးထဲက....
အသက်မသေပဲ.... လွတ်မြောက်ခဲ့ တာ...
ပြန်ပြောပြယင် ယုံမယ့် သူတောင်ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး...
ပိပြားကျေမွသွားတဲ့ ကားလေးကိုပြန်ကြည့် မိယင် တော်တော်ကျောချမ်းသွားမှာအမှန်...
Posted by peter kyaw | at 2:27 AM |0comments
Labels: news: photos